Shaqaalaha Safaarada Libya ee Stockholm oo iscasilay | Somaliska
3 ka mid ah shaqaalaha safaarada Libya ay ku leedahay magaalada Stockholm ayaa shaqadooda iska casilay ka dib markii ay ka dhiidhiyeen waxay ku tilmaameen xasuuq ka socda Libya. Warqad ay u direen saxaafada ayay shaqaalahaas cambaareeyeen sida Libya ay ula dhaqmeyso mudaharadayaasha. Sidoo kale dibad bax ayaa ka dhacay irada safaarada Libya. Maalmihii ugu dambeeyay ayaa waxaa Libya ka dhacay mudaharaadyo aad u weyna ayadoo dowlada Qadafi laga saaray magaalooyin badan. Maanta ayaa warar aan la xaqiijin sheegayaan in Qadafi uu dalka Venezuela u cararay ayadoo ciidanka Milatariga ay diyaarado ku garaaceen dadka shacabka. Dhinaca kale labo bayloot oo ka tirsan milatariga Libya ayaa ka soo baxsaday ka dib markii lagu amray in ay duqeeyaan shacabka ayagoo ku soo degay dalka Malta. Sidoo kale waxaa maanta keliya is casilay safiirada Libya ay ku leedahay wadama India, China, Bangladesh, UNka iyo wadamo kale. Qadafi ayaa u muuqda in waqtigiisii soo dhamaaday ayadoo wiilkiisa uu xalay ku dhawaaqay in isaga iyo aabihiis ay dagaalami doonaan ilaa inta 1 qof uu noolyahay.
Shaqaalaha Safaarada Libya ee Stockholm oo iscasilay
3 ka mid ah shaqaalaha safaarada Libya ay ku leedahay magaalada Stockholm ayaa shaqadooda iska casilay ka dib markii ay ka dhiidhiyeen waxay ku tilmaameen xasuuq ka socda Libya. Warqad ay u direen saxaafada ayay shaqaalahaas cambaareeyeen sida Libya ay ula dhaqmeyso mudaharadayaasha.
Sidoo kale dibad bax ayaa ka dhacay irada safaarada Libya. Maalmihii ugu dambeeyay ayaa waxaa Libya ka dhacay mudaharaadyo aad u weyna ayadoo dowlada Qadafi laga saaray magaalooyin badan. Maanta ayaa warar aan la xaqiijin sheegayaan in Qadafi uu dalka Venezuela u cararay ayadoo ciidanka Milatariga ay diyaarado ku garaaceen dadka shacabka.
Dhinaca kale labo bayloot oo ka tirsan milatariga Libya ayaa ka soo baxsaday ka dib markii lagu amray in ay duqeeyaan shacabka ayagoo ku soo degay dalka Malta.
Sidoo kale waxaa maanta keliya is casilay safiirada Libya ay ku leedahay wadama India, China, Bangladesh, UNka iyo wadamo kale.
Qadafi ayaa u muuqda in waqtigiisii soo dhamaaday ayadoo wiilkiisa uu xalay ku dhawaaqay in isaga iyo aabihiis ay dagaalami doonaan ilaa inta 1 qof uu noolyahay.
Soomaali lagu dilay Stockholm
Sidee la isugu dheelitiri karaa diinta iyo danaha shaqada?